Madaxweynaha Puntland oo xariga ka jaray jidad laami ah oo laga dhisay Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe: Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo Salaasa ah xariga ka jaray labo waddo oo laami ah oo laga hirgeliyey magaalada Garoowe ee caasimada Puntland.
Waddooyinka laamiga ah ayaa Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa uu dhagax dhigay bartamihi sanadkii tegay ee 2014, waxaana lagu fuliyey mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland (JPLG) oo si habsami leh uga soconaya guud ahaan Gobolada Puntland.
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in labadaan waddo iyo weliba wadooyinka kale ee laamiga ah ay wax badan ka badaleen bilicda caasimada Dawladda Puntland ee Garoowe, isla markaana hagaajinayaan adeegyada Bulshada.
“Waxaan rabnaa in dedaalkeena isugu gayno inaynu beddelno wajiga Puntland ay leedahay, waxaan mar walba xoogga saaraynaa baahida muhiimka ah sida waddooyinka, Biyaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalkeena in wax badan aanu ka qabano” ….” Hadaan nabad-gelyo jirin horumar lama gaarayo, horumarkuna waxaa uu ku xiran yahay nabad-gelyada, cidna dawladdu gorgortan kala gelimayso nabadgelyada iyo jiritaanka Puntland ” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa rajeeyey in is-beddelku halkaas ka sii soconayo, sanadkasta.
“Waxaan rajeynayaa in sanadba sanadka ka dambeeya horumarku sii siyaado, wadooyinku noo siisiyaadaan, ceelasha biyuhu sii siyaadaan garoomada diyaaradaha iyo dekeduhu noo sii siyaadaan insha’allah Puntland isbedal dhab ah ayaa ka dhicidoona ”Ayuu hadalka raaciyey Madaxweyne Cabdiweli Gaas.
Waddada madaxweynuhu xariga ka jarey ayaa xiriirsa xaafadaha Wadajir, Horseed iyo Waaberi, ee Garowe.